Instagram ga - agbakọta bọtịnụ iji tụgharịa ọnwa na - esote | Gam akporosis
Instagram ga-ewebata bọtịnụ iji sụgharịa ọnwa na-abịa
Instagram gbanwere akara ya otu ọnwa gara aga wetara ya a nnukwu uzu na net dị ka ọtụtụ nde ndị ọrụ nke a kasị foto ọrụ na-eji ya. Ihe ọ bụla ọ bụ, Instagram na-egwuri egwu ya na ọ dị ka mgbanwe ahụ abiawo n'aka n'ihi na n'ikpeazụ, otu onye na-eji ụdị ihe ahụ eme ihe na agba ọzọ yana ihe na-eme taa na teknụzụ na netwọkụ mmekọrịta.
Mgbe ịmara ụbọchị abụọ gara aga na ị ruru 500 ọtụtụ nde ndị ọrụ, Taa Instagram ekwuputala na ọ ga-ewebata ọnwa na-abịa n'ihu bọtịnụ a ga-agbakwunye ebe akụkọ na profaịlụ nke edere n'asụsụ dị iche na nke dị na ntọala nke ngwa ahụ. Nkwuputa a egosighi ma enwere ike iji ya mee ihe n'otu n'otu na post.
Instagram dị n'ụdị dị ukwuu na ọkwa ọkwa nke ndị ọrụ 500 nke ha Nde 300 na-abanye kwa ụbọchị na ngwa. Ohere dị elu maka ọrụ nke doworo onwe ya dị ka ihe kachasị mma maka isoro ndị enyi, ezinụlọ na onye ọ bụla nwere ike ịchọta ha site na hashtags anyị nwere ike ịkọ na njide ndị ahụ.
Ọrụ na-arahụ inweta na mma na na, ọ bụ ezie na mmelite na-abịa site n'oge ruo n'oge, enwere ike ịchọ ha ka ha gbaa ọsọ na ịmalite ha. Anyị maara mgbanwe na nhazi nke njirimara na ụfọdụ ihe ọhụụ na onye ọzọ gbasara njikọ nke vidiyo dị ogologo.
Nhọrọ ị gbakwunye ntụgharị gaa profaịlụ na akụkọ ndị ahụ ga-eme ka anyị nwee ike iso ndị ọrụ ahụ si mpaghara ndị ọzọ nke ụwa na-emekọrịta ihe n'ụzọ ka mma, nke ga-enye nnukwu isi maka ọrụ na-eweta ọtụtụ mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Instagram ga-ewebata bọtịnụ iji sụgharịa ọnwa na-abịa
Snapseed na emelitere na-anọpụ iche na agba onye na-atụtụ na profaịlụ maka Raw